#oromoRevolution – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA
#OromoRevolution Sadaasa 01,2016) Ilmaan Oromoo sabboonoon waraana mootummaa wayyaanee keessaa gara QBO ABOtti dabalaman
OromoRevolution Sadaasa 01,2016) Ilmaan Oromoo sabboonoon waraana mootummaa wayyaanee keessaa gara QBO ABOtti dabalaman tarkaanfilee mootummaa gabroomfattuu fi goolessituu wayyaanee irratti fudhatan jabeessanii itti fufuun diina irraan kasaaraa guddaa ga’aa jiran; meeshaalee waraanaas dhuunfatan.
Ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisa mootummaa wayyaanee keessaa mootummaa ummata isaanii haala suukanneessaan fixaa jiru tajaajiluun ga’uu qaba jedhanii murteeffatuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamuutti dabalaman walitti fufiinsaan Oromiyaa bakkoota gara garaa keessatti ummata waliin ta’uudhaan humna diinaa irratti tarkaanfilee jajjaboo fi diina rifaasise fudhatuu jabinaan itti fufanii jiran.
Haaluma kanaan Onkoloolessa 30,2016 sa’aa 3:10 irratti humni qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamutti dabalamee falmaa geggeessaa jiru kun Baha Oromiyaa Godina Baha Harargee naannoo D.Dhawaa Ashaa Dawwalleetti waraana wayyaanee Agaazii jedhamu kan ilmaan Oromoo irratti yakka waraanaa raawwataa jiru haleelee jira.
Tarkaanfii kanaanis Agaazota 5 yeroo ajjeesu, garii isaanii madoo taasisee jira. Lola kana irratti qawwee AKM 20, Rasaasa 30,080 ol akkasumas mi’oota biroo diina irraa booji’uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira.
Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo waraana isaa keessaa yaamicha qabsoo saba isaaniif awwaatuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa dhufuun haalaan kan isa yaaddessee jiru oggaa ta’u, humna ummatatti dabalamee falmaa jiru kanaa fi ummata gargar kutuu fi Warraaqsa Biyyaalessaa FXG dhaabuuf abjootuun labsii yeroo hatattamaa labsus falmaan finiinee itti fufee jira.